how do you think of that? — MYSTERY ZILLION
December 2008 edited December 2008 in Other
I think most of you would agree me that the personal training is expensive and can not bear fruit. so I choose to do bodybuilding through watching the P90X which i nearlly purchased from dvdorderonline and it's easy and oecumenical.
how do you think of that?\_:D/
mystery zillion forum သည် နည်းပညာ သီးသန့် forum တစ်ခုဖြစ်ပြီး နည်းပညာဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ဗဟုသုတတိုးပွားစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ မည်သူမဆို အခမဲ့ register လုပ်နိုင်ပါသသည်။ mystery zillion forum ၏ policies များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ သဘောတူညီမှုညီပါက checkbox တွင် check လုပ်ပြီး register လုပ်နိုင်ပါသည်။
mystery zillion forum ၏ administrator နှင့် moderators များသည် forum နှင့် မသင့်လျော်သည်ဟု ထင်မြင်သော post များကို ဖျက်ခြင်းနှင့် member များအားလိုအပ်လျှင် သတိပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါမည်။ mz forum တွင် နိုင်ငံရေးနှင့် အခြားအကြောင်းအရာများ ဆွေးနွေးခွင့်မရှိပါ။ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ရိုင်းစိုင်းစွာပြောဆိုခြင်း တစ်စုံတစ်ယောက်အား ထိခိုက်နစ်နာအောင်ရေးသားခြင်း ၊ forum အား ဖျက်လိုဖျက်စီးလုပ်သော member များအား admin များနှင့် moderator များကို လိုအပ်သလို ဆောက်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
mystery zillion forumတွင် member များ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရင်းရင်းနှီးနှီး ပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာ ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။